Ireo Tantara Voalohany Miresaka Fiainan-Jazavavy Ao Kyrgyzstan · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Novambra 2014 19:21 GMT
Vakio amin'ny teny русский, عربي, বাংলা, Español, Deutsch, Ελληνικά, English
Roa volana lasa izay, nanomboka nanoratra momba ny tantaranay manokana izahay ary namoaka izany ao amin'ny bilaoginay. Nanomboka nanangona ireo tantaran'ny tovovavy hafa avy ao amin'ny distrika samihafa ao Kyrgyzistan ihany koa izahay. Samy hafa tanteraka ny tantaran'izy ireo.
Tamin'ny mailaka nalefan'izy ireo taminay, nitantara momba ny asa mafy, fanavakavahana, sy ny rafi-pampianarana ao Kyrgyzstan izy ireo sy ny fahatsapahan'izy ireo. Nanoratra tao amin'ny bilaogy i Jibek: